Kulan looga hadlayo arimaha dastuurka oo maanta lagu qabtay Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan wadatashi ah oo ku saabsanaa Geedi-socodka dib-u-eegista Dastuurka la yeelatay Maamulka Gobolka Banaadir.
Kulanka oo ay ka soo qayb galeen Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, Ku Xigeenadiisa iyo Gudoomiyayaasha Degmooyinka Gobolka waxaa ay talooyin ka dhiibteen hawlaha ay Wasaaradda wado.
Wasiirka Wasaaradda Dastuurka Soomaaliya Cabdi Xoosh Jibriil ayaa sheegay in Wasaaradda ay ka go’antahay in wadashaqeyn wanaagsan ay la yeelato dhammaan dhinacyada ay hawsha kala dhaxeeyso.
“Markii aan xilka Wasaaradda la wareegnay waxa aan go’aan ku gaarnay abuuridda jawi wadashaqeyn oo aan la yeelanno hay’adaha dawladda ee an shaqo wadagga nahay, waxa aan aas-aasnay Madasha Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka ee Dawladda Dhexe iyo Dawlad Goboleedyada oo sedexdii bilba mar shira waxaana kulamo wadastashi ah la qaadanay madaxda sare ee Dawlad Goboleedyada oo aan ku booqanay Goboladooda. Heshiis wadashaqeyn ayaanu la galnay labada Guddi ee hawsho inaga la dhaxeeyso marwalbana heshiishkaas waanu ilaalineynaa dhankeenna; wadashaqeyn iyo iskuduubni ayay marwalba Wasaaradda ku dedaalaysaa si dib-u-eegista Dastuurka loogu soo gabagabeeyo muddo sanad ah waxaana Gobolka Banaadir dhinacooda ka sugeynaa wadashaqeyn wanaagsan”ayuu yiri Wasiir Xoosh.
Waa uu sii hadlay waxa uuna yiri “Sida aad ogtihiin maqaamka Gobolka Banaadir waxaa lagu cadeeynayaa dib-u-eegista Dastuurka ee aan hadda wadno waana muhiim in Maamulka iyo shacabka Gobolka Banaadir ay talooyinkooda ku biiriyaan Gedi-socodka dib-u-eegista Dastuurka.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisoow) ayaa Wasaaradda uga mahadnaqay hawsha ballaaran ee ay heyso, si gaar ahna kulanka ay maanta la yeelatay Maamulka Gobolka Banaadir waxa uuna ballanqaaday in Gobolku uu Wasaaradda ku garab istaagi doono hawsha ay waddo.
Ugu dambayn, Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, Ku-Xigeenadiisa iyo Gudoomiyayaasha Degmooyinka ayaa waxay talooyin u soo gudbiyeen Wasaaradda oo ay kamid yihiin dib u eegista dastuurka iyo Maqaamka Caasimadda.
Baarlamaanka Jubaland oo aan ku shiri karin meel ka baxsan Kismaayo.